“အတွေးစလေးတွေ”: ချစ်သော ချီလီ . . .
ဟိဟိ ဆရာ့ချီလီက သာမီးရဲ့ အိမ်ဂျယ်ဖြစ်သွားရောလား...။ ချစ်စရာလေးနေမယ်နော်..။ ဒါပေသိ ခွေးမှမဟုတ် ဘာအကောင်ပလောင်မှမချစ်တတ်တာခက်တယ်..။
သံယောဇဉ် အကြောင်းကတော့ မပြောပါနဲ့တော့။ သံယောဇဉ် ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ကို တစ်ယောက်ထဲ နေနေတာ။ ဘာညာတွေလဲ မွေးမထားဘူး။ ဘာညာတွေကိုလဲ ကျွေးမထားဘူး။
ဟုတ်ပ ဆရာရေ... ခွေးဆိုလို့ကတော့ မွေးချင်တာမှ တပိုင်းသေနေတာ.. အရင်မြို့ နန်တုန်မှာတုန်းက တစ်ကောင်မွေးလိုက်သေးတယ် နောက် မြို့လည်းပြောင်းရော သူများကို ပေးခဲ့ရပြန်ရော... ဒါနဲ့ပဲ ခွေးမမွေးဖြစ်တော့တာ... ရွှေပြည်အပြီးပြန်ဖြစ်ရင်တော့ ၁ ဒါဇင်လောက်ကို မွေးဦးမှာ.... ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာ ခွေးက ဆယ့်လေး ငါးကောင်လောက်ရှိတာ... အကုန်လုံးက အလ်ချားစီးတွေကြီးဘဲ....
ဆရာပြောပြလိုက်မှ ခွေးမျိုးတွေကို စုံအောင်သိရတော့တယ်ဗျာ...
ကျွန်တော်တို့က အညာသားတွေဆိုတော့ ခွေး ကိုပိုမွေးကြတာပေါ့ဗျာ လူမရှိတဲ့အချိန် အိမ်စောင့် ရသလို နွေအခါဆိုလည်း တပြုံတမကြီးနဲ့ တောလည်ရတာ ပျော်စရာကြီး ။
အဲလို နိုင်ငံခြားခွေးတော့ မမွေးနိုင်ပါဘူးဗျာ
14 June 2012 at 06:42
အိန်ဂျယ်လှိုင်ကိုများ စောင်းပြောလေသလား.. ဆရာကြည့်.... :P.. ဟိဟိ... ခွေးကတော့ ဟုတ်တယ် ဆရာရေ... မမွေးချင်တော့ဘူး... သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းလို့... တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် အတော်ခံစားရတာ....
လမင်းတော့ ဘာမှသံယောဇဉ်မထားချင်တော့လို့ 
ဘာမှမမွေးဘူး. ဆရာရေ အမေဆို ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးမိပါတယ်.. ပျောက်သွားလို့ အခုထိ စိတ်တဇဖြစ်နေတာ ဆရာရေ..
သံယောဇဉ်...နော်..အကို.. ခွေးချစ်သူမို့ စာနာမိပါရဲ့..
ပစ်ပစ်ဆို ခွေးတွေ ကြောင်တွေ မချစ်ဘူး
ကဏန်းမျိုး ဦးဟန်ကြည်က လူတွေနဲ့သာ ကီးသိပ်မကိုက်ချင်တာ အနှီချစ်လှစွာသော ပါပီကလေးတွေနဲ့ကတော့ သဟဇာတ ဖြစ်မှဖြစ်။
ဆရာနဲ့တူတယ်..နယ်မှာတုန်းက အိမ်နားက ခွေးတွေဆို မနက်တိုင်း စန်းထွန်းတောင် မနိုးသေးဘူး..ဒင်းတို့ က အိမ်ရှေ့ ရောက်နေပြီ အစာတောင်းဖို့ ..ခွေးမွေးချင်တာ ဆန္ဒသာရှိတယ် အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးပါဘူး ဆရာရယ်..လူတောင် အနိုင်နိုင်ရယ်..ခွေးကျောင်းဖို့နေနေသာသာ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မကျောင်းနိုင်လို့ ..စိန်ချီလီလေး အကြောမာတာလေးကိုက ချစ်စရာလေး..ဆရာတို့ ကို မှတ်မိတာတော့ ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတယ်...
ဒီလို သံယောဇဉ်မျိုးတော့ ကိုယ်ချင်းစာတယ် အိမ်မက်တို့လဲ ဒီအချစ်တော်လေးတွေ အတွက် မျက်ရည်တဝဲဝဲနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါ ရှိပြီလဲ မသိ..ခုလဲ အိမ်မှာ တစ်ကောင်ရှိသေး ဦးဟန်ကြည် ချီလီလေးနဲ့ အမျိုးတူပဲ..သူ့အကြောင်းရေးမယ်လို့ မနေ့ကတောင်တွေးမိနေတာ..ဦးဟန်ကြည်နဲ့ အကြံချင်းတူနေတယ်..
ကျောင်းထိုင်မှပဲ မွေးတော့မယ်ဆရာရေ။ ဟုတ်ပါ့၊ သံယောဇဉ်ဆိုတာလည်း တွယ်မိရင် အခက်သားကလား။